ဘလော့ - အွန်လိုင်းစတော့ရှယ်ယာ Investing
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအနေဖြင့်တစ်နေ့တာကုန်သွယ်ခြင်းမှတစ်ဆင့်ငွေရှာရန်လွယ်ကူသည်ဟုမယူဆသင့်ပါ။ ကုန်သွယ်ရေးနယ်ပယ်တွင်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်ရန်အထောက်အကူပြုမည့်စည်းကမ်းကိုထိန်းသိမ်းရန်လူတို့ကြိုးစားသင့်သည်။ ဤတွင်လူသည်ငွေရရန်လမ်းပြမြေပုံကိုကပ်ထားသင့်သည်။ သင့်လျော်သောအလေ့အကျင့် […]
ကုန်သွယ်ရေးအချက်ပြမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိရန်လိုအပ်သည့်အရာများ။
Forex ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာလူကြိုက်များလာသည်နှင့်အမျှလူတို့သည်ငွေရှာရန်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကိုရှာဖွေနေကြသည်။ ၎င်းသည်မလွယ်ကူပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အခြေခံကိုနားလည်ရန်ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်အချိန်များစွာလိုအပ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်လိမ်လည်သူများသည်အစပြုသူများကိုရှုပ်ထွေးစေသည်။ သူတို့သည်ဆုံးရှုံးသည်။ ညွှန်းကိန်းမြောက်မြားစွာရှိသော်လည်းအနည်းငယ်သာအသုံးပြုကြသည်။ […]
ဒီနေ့ဆောင်းပါးကဆုတ်ခွာရန်ဆွေးနွေးထားသည်။ အဲ့ဒါဘာလဲ? အဲဒါကိုဘယ်လိုအကဲဖြတ်မလဲ၊ ဤမေးခွန်းများအတွက်အဖြေများကိုသင်အောက်တွင်တွေ့နိုင်သည်။ မာတိကာထုတ်ယူထားသည့်ဖော်ပြချက်ရုတ်သိမ်းအကဲဖြတ်မှုသင်အကျဉ်းချထားခြင်းအတွက်ပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်းအတွက်သင်အသုံးပြုနိုင်သောအရာအကျဉ်းချုပ်ကုန်သွယ်မှုဖော်ပြချက်အရောင်းအဝယ်လောကတွင်ဆုတ်ခွာခြင်းသည်အထွတ်အထိပ်မှ […] အထိကျဆင်းခြင်းဖြစ်သည်။
အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်စဉ်သင်တွေ့နိုင်သောစျေးနှုန်းဇယားအနည်းငယ်ရှိသည်။ လူကြိုက်အများဆုံးဂျပန်မီးခွက်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါအကောင်းဆုံးလား။ Heiken-Ashi လို့ခေါ်တဲ့အခြားမျိုးကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲ။ ဒီနေ့ဆောင်းပါးကိုဖတ်ပါ၊ မာတိကာ Heiken-Ashi မီးခုံမီးကဘာလဲ Heiken-Ashi ဇယားကိုဘယ်လိုဖော်ပြထားသလဲ။
လောင်းကစားသူ၏မှားယွင်းမှုကဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်မှားယွင်းသောယူဆချက်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းသည်မှားယွင်းသောထင်မြင်ယူဆချက်များနှင့်ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာမကောင်းသောဆုံးဖြတ်ချက်များကို ဦး တည်နိုင်သည်။ စျေးကွက်ကိုသင်အမြဲတမ်းသေချာစွာဆန်းစစ်ပြီးသင်ဇယားတွင်သို့မဟုတ်သင့်စိတ်ထဲတွင်ရှိနေသောထောင်ချောက်များကိုရှောင်ရှားရမည်။ ဒီတော့လောင်းကစားသမားရဲ့မှားယွင်းတဲ့အမှားတွေကဘာလဲ? မာတိကာလောင်းကစားသမားများ၏မှားယွင်းသောအချက်အလက်များကုန်သွယ်ရေး […]
Bidens Presidence သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးကွက်အပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသည်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးကွက်များသည်မတည်ငြိမ်သောအခြေအနေတွင်ရှိသည်။ ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်သမ္မတအသစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရချိန်တွင်ထင်မြင်ချက်အမြောက်အများကိုစတင်လေ့ရှိပြီး၎င်းသည်ပြုလုပ်နေဆဲထင်မြင်ချက်ကိုဖြေလျှော့ရန်မကူညီနိုင်ပါ။ Donald Trump သည် ၂၀၁၆ ရွေးကောက်ပွဲတွင်အနိုင်ရသောအခါအညှာနှစ်ခုစလုံးနှင့် ပတ်သက်၍ ကြီးမားသောထင်မြင်ချက်များစတင်ခဲ့သည်။